0.1 "Hej Jerry, ahoana ne ahafahako manao bolongana igračka ny anao?"
0.2 Raha mikaroka ‘manao fitoraham-bola amin’ny banky’ ao amin’ny Google ianao, iray amin’ireo valim-pikarohana soso-kevitra atolotr’i Google dia "azonao atao tsara ny mitoraka blaogy". Mampiseho izany fa misy mpikaroka maro tsy ahitam-bokatsoa izay tsy mahalala hoe firy no azonao atao amin’ny bolongana – satria ny soso-kevitr’i Google dia mifototra amin’ny habetsaky ny fehezanteny fototra. Ka ohatrinona nema azonao amin’ny alàlan’ny fanaovana bilaogy? Mba hamaliana ny fanontaniana, andao hojerentsika ny Internet. Lindsay sy Bjork avy ao Pinch of Yum dia nanao $ 85,000 mihoatra ny $ 2016 tamin’ny vola miditra (nijanona tsy nizara tarehimarika marina izy ireo taorian’izay). Pat Flynn je stigao u pametni pasivni dohodak od 160 000 USD u Tamam’ny Desambra 2017. Matthew Woodward dia nanao $ 25,000 mihoatra ny $ 2017 tamin’ny volana Desambra. Ny karazana fidiram-bola azoko avy amin’ireto tatitra momba ny fidiram-bola ireto dia: Azo atao izany! Ny mpitoraka blaogy dia manao vola amin’ny Internet, ary Amin’ny hevitra sy paikady mety, tsy misy fetrany ara-bakiteny ny habetsahanao azonao atao ao anaty aterineto. Ity dia mitondra bilo koja amin’ny fanontaniana manaraka … Ahoana no ahazoan’ny mpamaham-bolongana vola? Misy fomba tsy misy fiafaràna mba hahazoana vola avy amin’ny blôginao. Reklamno oglašavanje. Pridružuje mivarotra. Mamorona sy mivarotra ny vokatrao manokana. Famerenana fanatsarana. Inona no safidy tsara indrindra? Arakaraky ny maha-indostrianao anao sy ny toerana misy ny blôginao dia hisy fomba tsara kokoa handraisana ny blôginao. Gael Breton avy amin’ny Authority Hacker dia nanadihady ny fomba fitadiavan’ireo bilaogera 23 amin’ny famahanam-bolongana ary namintina izany Ny fivarotana ny vokatrao manokana dia, amin’ny ankapobeny, tena mahasoa indrindra (jereo ny tay tay). Poslovni modelTotal vola miditraFandaniana tanterakaProfitProfit Marža usluge $ 21.508 $ 2.805 $ 18.703 666% Prodaja oglasa $ 235.977 135 USD, 041 100 USD, 936 74% Affiliate Marketing $ 214.232 $ 47.664 $ 166.568 349% Ny vokatra mivarotra $ 434.004 $ 113.767 $ 320.237 281% Ny saram-pitsaboana matetika dia sarotra ny mivarotra ary noho izany dia miteraka latsaky ny fidiram-bola ny tombony azo antoka. Maro amin’ireo mpitoraka blaogy ambony no manao bilaogy mivantana sy mivarotra. Ny varotra an-tserasera dia mamokatra vola be (2nd best), fa noho ny mpivarotra adiresy hamokatra votoaty marobe ary indraindray mahazo ny fiveamoivoizana, dia mihena haingana ny marika. Pripadnost ara-barotra no tena tetikasam-pihariana mahomby indrindra, izay mahatonga azy ho tsara ho an’ny mpamaham-bolongana vaovao izay mila manangom-bola haingana. Ity tranonkala ity dia natokana ho an’ny fidiram-bola avy amin’ny fiarahamonim-pirenena – ary nahavita nitombo avy amin’ny bilaogy iray-olona iray izahay ho an’ny ekipan’ny tonian-dahatsoratra iray, bilaogera mavitrika iray, aryy mpivarotra media sosialy roa. Ny fivarotana vokatra ho an’ny vokatra dia mamokatra ny vola miditra indrindra amin’ny marika tombontsoa lehibe. Ny marika dia kely ambany noho ny fivarotana tokotany noho ny vidiny mifandraika amin’ny serivisy mpanjifa, ny fanodinana fandoavam-bola, sns., Fa ny tahan’ny fivoarana Avo lenta dia manome izany ho an’ny # 1 loharanom-bola azo antoka ho an’ny mpitoraka blaogy. Hanomboka Raha mamaky mandra-pahatongan’ity dia mbola tsy manana bilaogy ianao… dia tsy maintsy misitrika loha ianao izao. Fa maninona no tsy nanomboka teo aloha ianao? Eny ary, mbola tsy tara raha nitsambikina tao. Ity ny ahy dingana iray amin’ny dingana vita amin’ny fomba hamoronana blaogy eto. Vakio ity ary aloha ary miverena amin’ity torolalana manaraka ity. Hiandry aho! U redu! Koa ankehitriny dia vonona ny blôginao ary isika rehetra dia napetraka ho an’ny volamena … Ahoana no ahafahanao manao bilaogy vola, ho an’ny tena?
2.4 Povezno povjerenstvo
2.7 Inona nema pogrešnih podataka Kokoa amin’ny podataka?
3 Ciljani promet
3.2 1. Objavljivanje gostiju
3.4 Fanomezana br. 2: Mampirisika ny vokatra avy amin’ny orinasa amin’ny sehatra samihafa
3.5 Ideja br. 3: Manomàna birao iray
4.1 Akcija Makà!
"Hej Jerry, ahoana ne ahafahako manao bolongana igračka ny anao?"
Amin’izao fotoana izaho aho dia mahazo ny fanontaniana "mametraka vola an-tserasera" amin’ny namana sy ny fianakaviana.
Ny sasany maniry manomboka blôgy ary manao fidiram-bola kely amin’ny aterineto. Ny hafa, handositra ny fitohanan’ny fiara miasa, na hanitatra ny orinasa an-tserasera, na hiala amin’ny asa 9-do-5, sns.
Tena maniry ny hanampy ireo izay fantatro aho. Saingy, izaho dia afaka mizara betsaka igračka izany na mandritu ny fivoriana ataon’ny olona na Whatsapp na Facebook Messenger.
Noho izany, manoratra ity lahatsoratra ity aho mba hizara lesona nianarako ho igračka ny mpamaham-bolongana nandritra ny taona 15 farany.
Ka ohatrinona nema azonao amin’ny alàlan’ny fanaovana bilaogy? Mba hamaliana ny fanontaniana, andao hojerentsika ny Internet.
Lindsay sy Bjork avy ao Pinch of Yum dia nanao $ 85,000 mihoatra ny $ 2016 tamin’ny vola miditra (nijanona tsy nizara tarehimarika marina izy ireo taorian’izay).
Pat Flynn je stigao u pametni pasivni dohodak od 160 000 USD u Tamam’ny Desambra 2017.
Matthew Woodward dia nanao $ 25,000 mihoatra ny $ 2017 tamin’ny volana Desambra.
Ity dia mitondra bilo koja amin’ny fanontaniana manaraka …
Reklamno oglašavanje. Pridružuje mivarotra. Mamorona sy mivarotra ny vokatrao manokana. Famerenana fanatsarana.
Gael Breton avy amin’ny Authority Hacker dia nanadihady ny fomba fitadiavan’ireo bilaogera 23 amin’ny famahanam-bolongana ary namintina izany Ny fivarotana ny vokatrao manokana dia, amin’ny ankapobeny, tena mahasoa indrindra (jereo ny tay tay).
Poslovni modelTotal vola miditraFandaniana tanterakaProfitProfit Marža
usluge $ 21.508 $ 2.805 $ 18.703 666%
Prodaja oglasa $ 235.977 135 USD, 041 100 USD, 936 74%
Affiliate Marketing $ 214.232 $ 47.664 $ 166.568 349%
Ny saram-pitsaboana matetika dia sarotra ny mivarotra ary noho izany dia miteraka latsaky ny fidiram-bola ny tombony azo antoka. Maro amin’ireo mpitoraka blaogy ambony no manao bilaogy mivantana sy mivarotra.
Ny varotra an-tserasera dia mamokatra vola be (2nd best), fa noho ny mpivarotra adiresy hamokatra votoaty marobe ary indraindray mahazo ny fiveamoivoizana, dia mihena haingana ny marika.
Pripadnost ara-barotra no tena tetikasam-pihariana mahomby indrindra, izay mahatonga azy ho tsara ho an’ny mpamaham-bolongana vaovao izay mila manangom-bola haingana. Ity tranonkala ity dia natokana ho an’ny fidiram-bola avy amin’ny fiarahamonim-pirenena – ary nahavita nitombo avy amin’ny bilaogy iray-olona iray izahay ho an’ny ekipan’ny tonian-dahatsoratra iray, bilaogera mavitrika iray, aryy mpivarotra media sosialy roa.
U redu! Koa ankehitriny dia vonona ny blôginao ary isika rehetra dia napetraka ho an’ny volamena …
"Manaova ny votoatiny tsara; ny vola sy ny Fiveamoivoizana dia hanaraka, "hoy ilay manam-pahaizana.
Raha tsy misy ny iray amin’ireo singa ireo dia tsy hamoaka vola biti avy amin’ny blôginao ianao.
Ny ratsy indrindra, ity vokatra ity dia vokatra ara-tsakafo ary mivarotra ihany mandrita ny fahavaratra, noho izany dia mbola voafetra ihany aho tamin’ny fivarotako. Ny habaka dia tsy mihoatra ny varotra roa isan-taona. Tsy voatery ny fotoanako hanorenana an’io tranonkala io.
Nahoana no mitranga bilo koja amin’ny banky ny tranga igračka izany? Satria izany no vola.
Manaova fikarohana mifandraika amin’ny nichanao Google ili Bing. Misy dokam-barotra ve ao amin’ny pejin’ny valin’ny fikarohana?
Azonao ampiasaina avy eo Google Planet Ključna riječ planer Manoritsoritra ny vidin’ny sainam-pirinty ho an’io fikarohana io ary maminavina hoe ohatrinona no azonao atao amin’ny Google Adsense klik *; ary noho izany, ohatrinona no azonao atao amin’ny fivarotana habaka adiresy.
Mariho fay misy fitsipika mazava an-tsoratra fa fanombantombanana be loatra, Google dia mandoa 30 – 50% nigdje vidljivi Adsense Publishers.
Ny sary eto ambany dia ohatra sasantsasany izay hitako tamin’ny Spyfu Besplatno pretraživanje. Ny tsirairay amin’ireo fikarohana ireo dia latsaka kely noho ny minitra 5 mba hamitana azy – ary azoko fantarina ny tombom-barotry ny niche amin’ny fandinihana ireo antontan-taratasy ireo. Misy tsipirian-javatra sarobidy kokoa raha toa ka mihoatra ny fikarohana malalaka isika saingy hifikitra amin’ny famoahana maimaim-poana amin’izao fotoana izao. Mba hanaovana ny fikarohana ataonao dia tsindrio fotsiny amin’ny mpifaninana anao (na ireo mpilalao lehibe ao amin’ny sainanao) amin’ny fikarohana.
Ny tena fiainana marina # 1 – 64,000 $ / mjesečno Admins
Niša # 1 – vokatra malefaka, vahaolana raharahambarotra. Misy mihoatra ny orinasa hafa an’ny 10 izay manolotra fandaharam-pikambanana ao amin’ity orinasa ity. Spyfu nanombantombana mpivarotra it mandy $ 64,000 $ amin’ny Adwords isam-bolana.
Niša # 2 – 100 000 USD / mjesečno u Adwords
Niša # 2 – Fanatanjahantena ara-panatanjahantena – mieritrereta marika ara-panatanjahantena igračka ny Adidas, Nike, ary New Balance, fa amin’ny kely kokoa ary mifantoka amin’ny karazana fanatanjahantena. Sviđa vam se 100.000 USD, samo-bolana amin’ny tenifototra maherin’ny 57.000 arapskih i špijunskih.
Niša br. 3 – 60 000 američkih dolara mjesečno
Ny Niche # 3 – mpamatsy solosaina IT – tsena iraisam-pirenena, ny ankamaroan’ny olona izay mitaky tranonkala dia mila izany. Misy 10 – 15 mpilalao lehibe hafa amin’ity sehatra ity. Ity orinasam-pandraharahana ity dia manolotra ny tenimiafina 3.846 ao amin’ny Google ary mandany ny $ 60.000 isam-bolana.
Niša # 4 – $ 9,500 / mjesečno u Adwords
Niša # 4 – Mpanome tolotra tranonkala. Ity orinasa ity dia iray amin’ireo fanombohana mahazatra vitsivitsy taona vitsy lasa izay. (Gaga aho mahita azy ireo mandany efa ho 10.000 USD isam-bolana amin’ny adwords).
Niša # 5 – 71,500 USD / mjesečno za Adwords
Niša # 5 – Vokatra ara-bola manerantanija. Ny sary nalaina dia ny fanadihadiana iray amin’ny iray amin’ireo mpilalao lehibe indrindra amin’ity sambo ity. Nanana tranonkala roa tao amin’ity orinasa ity aho niverina tao amin’ny 2000 – tsy ho gaga raha mahita orinasa mandany mihoatra ny 100,000 $ isam-bolana amin’ny adwords.
Niša 6 – 24.200 dolara mjesečno u Adwords
Niša # 6 – Mpanome tolotra tranonkala. Ity tranonkala ity dia tranonkala iray ary tsy mivarotra ny vokany manokana. Ny tompon’ny tranokala dia mandany vola mihoatra ny $ 20,000 isam-bolana amin’ny dokambarotra PPC.
Fomba iray hafa ampiasaiko matematika mba hitsaràna ny tombotsoan’ny niša iray dia mijery ireo isa ao Komisija Junction (CJ).
Azonao ampiasaina ny vola harenina (barazy maitso) ho igračka ny mety ho endriky ny karama.
Raha efa manana ianao Facebook stranica (afaka mamorona iray ianao alohan’ny hanombohana blôgy, afaka maimaim-poana), ny toerana voalohany hijerena ny fanorenanao. Alefaso bilo koji amin’ny sasany amin’ireo fanatanjahan’ireo mpankafy ireo ary tandremo ny demografika (lahy / vavy, toerana, manambady / tokana / nisara-panambadiana, taona, sns) ary ny tombontsoany.
Facebook grupa Mifandraisa am-piangonana – vakio ny resadresaky ny mpampiasa mba hahatakatra ny olana sy ny filany.
Ho an’ireo izay manana pejy Facebook dia mandehana ao amin’ny Insights> Pregled> Pejy ho Watch. Fejsbuk nije hitanao ary ampitahao ireo pejy mitovy soso-kevitry Facebook. Azonao atao tsindriana amin’ny rohy tsirairay mba hahitanao ireo lahatsoratra malaza nivoaka tao amin’ireo pejy ireo.
Manorata lohateny lehibe sy votoatim-baovao – Fantaro hoe iza amin’ireo lahatsoratra ao amin’ny Facebook no mahazo ny fidirana ambony indrindra, manorata lohateny igračka izao.
Nahoana ne fikarohana momba ny sokajy?
Ny lavaka lava vava amin’ny teny malemy (kredit: Alefaso bilo koji amin’ny Fox).
Ny fikarohan’ny sokajy dia matetika atao bilo koji am-piandohan’ny fanentanana SEO. Ny tanjon’izy ireo, matetika kokoa noho ny tsy, dia ny mamantatra matetika ny teny fanalahidy notadiavina (ho fohy na lava lava) ary mametraka lalana ho an’ny fanentanana.
Inona nema pogrešnih podataka Kokoa amin’ny podataka?
Ohatra: Ho an’ny fakantsary – Nikon, Canon, Sony; ho an’ny mariazy – Bali, Maldivi, Havaji; ho an’ny tranonkala – iPage, BlueHost, Hostgator; ho an’ny olo-malaza – Taylor Swift, Linkin Park, Bruno Mars.
Amin’ny ankapobeny, ny fividianana mividy dia avo kokoa raha be ny karoka momba ny ‘famerenan’ny Widget’, ‘ny sarisary modely ary ny anarana’, ’10 best widget brand’, ‘mividy widget online’. Mifanohitra amin’izany, ny fikarohana momba ny ‘tantaram-pifandraisana’, ‘fitarainana widget’, na ‘ny fanaovana Widget’ dia mety hiova ho fifanakalozana ara-barotra.
Tamin’ny fotoana voalohany nanombohako, maro ireo webmasteri (mariho – dia mbola niankina tamin’ny fitaovana iray antsoina moe "Uvertira") – izay ahafahanao mametraka fomba fikarohana tsotra fotsiny ny ‘mpitoraka blaogy’ ary ny rafitra dia hanome endrika sarotra anao indraindray io teny io dia mikaroka, maimaim-poana. Aminay dia ampitahao ireo isa ireo miaraka amin’ny habetsaky ny valim-pifidianana ary hitsara ny fiveaninanana (ary ny profitabilnost) amin’ny niche.
Ny Google Planner ključnih riječi dia iray amin’ireo fitaovana maotina vitsivitsy ampiasaiko amin’izao fotoana izao (raha azonao atao ny mandoa vola, manoro hevitra AHREFS ary Aza maimaika).
Ny sarimihetsika filma dia iray amin’ireo zanako indrindra. Tsy manangona azy ireo aho fa mankasitraka ny hatsaran’ny zavakanto sy ny fahatsiarovan-tena ao amin’izy ireo. Andeha hojerentsika raha afaka mampitodika ny fahalianako amin’ny hevitra bilaogy mahasoa izahay. Mariho fa tsy nanao fikarohana aho talohan’ny nanoratako ity torolàlana ity – ka dia mahaliana ahy igračka ny amin’izao fotoana izao.
Raha miješa ny endrika, dia toa mandeha amin’ny Internet intsony ny lohahevitra – izay tena lojika raha jerena ny fotoana lanin’ny olona ao amin’ny YouTube androany.
Rehefa mivoatra dia afaka mahita koa izahay fa ny ankamaroan’ny mpikaroka dia bilo koja Etazonija, Kenija, Inde, Aostralia, ary Kanada.
Mba hahatakarako tsara kokoa ny tabilao, matematika aho dia mampitaha ny fironana tsy fantatra amin’ny zavatra fantatro. Amin’ity ohatra ity dia nampidiriko ny teny motika "fanamarinana hosting". Hitanao fa misy olona maro kokoa mitady "afisy sarimihetsika".
Planer ključnih riječi na Google Planetu
Tsindrio ao amin’ny "sarimihetsika" amin’ny sarimihetsika ary tsindrio "Dobiti ideju".
Ny pejy voalohan’ny pejy (jereo eto ambany) dia mampiseho fa maro ireo karazana fikarohana amin’ny sarimihetsiketsa momba ny sarimihetsika (fandaharana 41,900 + isam-bolana), horonantsary sarimihetsika horonantsary (5,600s + isimi-horonahena shana sarimihetsika sarimihetsika, sarimihetsika malaza (3.400 + horonantska fikarohana), hollywoodska afisy sarimihetsika (Fikarohana 1.600 + isam-bolana), sy ny sisa. Misy ihany koa ny fangatahana Avo lenta kokoa momba ny famoronana ny sarimihetsika fimailo (~ 22.000 fikarohana).
Mba handehanana lalindalina kokoa dia azontsika atao ny manindry ny tenimiafina amin’ny antsipiriany bebe kokoa. Nije ahafahantsika mahatakatra kokoa ny fikasan’ny mpikaroka. Tandremo ny karazana fampahalalana hitan’ny mpikaroka.
Fehezanteny manan-danja ahitana ny "Napravite filmski poster" – ireo mpikaroka ireo no tena mitady ny lesona sy fitaovana fanontam-pirinty.
Miverina bilo koji Google pretraga
Ahoana raha tsi te hivarotra vokatra ara-batana isika? Fantastična dijasna i mahafinaritra loatra i obožavanje logistike. Afaka miblaogy sy mivarotra sehatra dokam-barotra fotsiny ve isika? Mba hamaliana ity fanontaniana ity dia andramo ny fikarohana sasantsasany ao amin’ny Google ary hijerena raha afaka mahita ny mpizarazara na ny programa afiliana isika.
Azonao atao ihany koa ny mijery akaiky ny dokam-barotra amin’ny dokam-barotra amin’ny dokambarotra – moa ve izy ireo mamorona dokam-barotra eny an-dalam-pikarohana? Raha eny, inona ny bilaogy? Afaka mivarotra mivantana mivantana amin’ireo mpivarotra ve ianao? Manome toky ny tombombaran’ity lohahevitra ity, dia afaka mampihatra ity data ity fanalahidy ity amin’ny Spyfu izahay mba hamaritana hoe firy ny mpizarazara no mandany.
Mba handinihana lalindalina kokoa, mety te-hibitsika amin’ny valin’ny fikarohana biolojika isika (tranokalan’ny rohy, ny fanatsaràna ny onjam-peo, ny haino aman-jery sosialy, sns.) Mba hahitana ny fahasarotam. petaninanana mamaba SEO.
Ny petaninanana SEO
Ankehitriny dia manana ny tsenan’ny tsena rehetra ilaina isika – fotoana hanapahan-kevitra. Tokony hitsambikina ve isika? Tena tsara tokoa ve izany? Inona no mety ho fiantraikany amin’ny fanatonana izany? Havelako ho anao ny fanatsoahan-kevitra.
Hifindra amin’ny lanjan’ny singa # 2: Ciljano ciljano izao isika
Kitapom-pahefana tsotra izany – Aleo lazaina fa ianao dia mitantana bilaogy DIY sy mivarotra zavakanto. Ny tahan’ny fanodinana ny blôginao dia 3% ary ny sandan’ny fanovana dia $ 25. Amin’ny ankapobeny, ho an’ny mpitsidika rehetra 100 ianao dia hanao ny fivarotana 3 ary manao $ 75. Raha miakatra amin’ny 200 ny isan’ireo mpitsidika manana lasibatra, avy eo ny teorika dia hisy fivarotana enry ary $ 150 mahasoa ny lalana.
Eo am-pahatsoram-po dia tsy mieritreritra aho fa tokony handany andro be loatra ny mpamaham-bolongana amin’ny fametahana tatitra Google Analytics.
Mandehana tsotra. Ny tanjonao dia ny hanangana blôgy tsara kokoa ho an’ny mpampiasa anao, fa tsy mandany ora maro aorian’ny ora fianarana ny teknika ao ambadiky ny Google Analytic.
Sesije / korisnici stečeni
Sampan-draharahan’ny Fiveamoivoizana / preporuka
Google Analytics (akvizicija)> Ny fiveamoivoizana> Loharano / Fampahalalana)
(Mbahahitana it nomerao ity dia midira ao amin’ny Nadzorna ploča Google Analytics> Fitondràna> Sadržaj web mjesta> Sve stranice.)
1. Objavljivanje gostiju
Ny fanalahidin’ny fahombiazana, raha ny fahitako azy, dia ny mahita ireo bilaogy tsara – ireo izay manana mpamaky marina sy mpanaraka ny media sosialy. Azonao ampiasaina Topsy ili Buzz Sumo ny mahita ireo bilaogy malaza sy ny mpikatroka ao amin’ny orinasanao. Na, afaka mandinika akaiky ny faritra fanehoan-kevitra ianao raha te hahalala raha mifanerasera amin’ireo bilaogera ireo mpamaky. Aza hadino hatrany fa mitoraka blaogy ho an’ny mpamaky tena ianao (noho izany dia zava-dehibe ny kalitao atiny). Aza hadino ny mandefa bilaogy manana Google PR avo lenta fa ny mpamaky tsy misy fiasa – tsy mandeha amin’ny 2015 intsony ity fanao ity.
Atsaharo ny fotoana isan’andro hanoratana. Aza olona manomboka manao ebook ary tsy mamita azy mihitsy. Sakano ora iray isan’andro, roa ora, 15 minit erskih olana na jezeru na firy. Soraty fotsiny io.
Manamboara prekrivač (tj. Canva) na mandoa an-tserasera iray hanao izany (mpamorona iray tsy miankina ~ $ 26 / ora averina araka ny fijeriko ny fandaniana)
Fanomezana br. 2: Mampirisika ny vokatra avy amin’ny orinasa amin’ny sehatra samihafa
Affiliation marketing dia mety ho loharanom-bola lehibe ho an’ny asa fanampiny fanampiny. Jereo ireto hevitra ireto mba hampidirana ny varotra afrikana amin’ny fidiranao:
Alefaso aloha ireo lahatsoratra efa navoakany sy tadiavo ireo vokatra na serivisy voalazanao. Raha vao hitanao izy ireo, mandehana fotsiny bilo koji amin’ny tranokala tsirairay ary mitadiava pejy "Partneri".
Avy eo dia araho ny torolalana mba ho lasa mpiara-miasa. Raha vao tonga iray ianao, dia matematika ianao dia mahazo ID iray mitazona ny adiresy ao amin’ny faran’ny URL.
Mandehana bilo koji amin’ny tranokalan’ny vokatra tsirairay ary jereo raha manana pejy mifandray izy ireo. Raha manao izany izy ireo, misoratra anarana amin’ny programa.
Voalohany, ataovy lisitry ny vokatra / tolotra tianao hampiasaina. Avy eo dia mandehana bilo koji amin’ny vohikalany ary jereo raha manana programa afilialy ry zareo.
Ny mailaka dia fitaovana marketing marketing mahery. Iray amin’ireo fantsona vitvivitsy arahin’ny olona isan’andro izy io vonona ny hivarotra.
Azonao atao ny mampiroborobo mivantana azy ireo amin’ny mailaka na mamorona torolalana lahatsoratra bilaogy ary hampiroborobo ireo. Na izany na tsy izany, dia afaka mahazo vola bilo.
It so no soso-kevitrao amin’ny autoresponder anao:
Mipetraha amin’ny fifandraisana fananganana mailaka, igračka ny fangatahana ireo mpandray anao raha afaka manampy azy ireo amin’ny zavatra ianao. Hanorina fitokisana koa izany ary hampihenana ny anaran’ny soratra.
Rehefa mampiroborobo ny vokatra dia mifantoha amin’ny valiny azony azony fa tsy ilay vokatra fotsiny. Raha mahazo valiny ianao amin’ny fampiasana azy, dia ho azonao antoka fa hazavainao amin’ny an-tsipiriany ireo. Nije hanao ny varotra ho anao.
Ideja br. 3: Manomàna birao iray
Tafiditra ao amin’ny birao posao ny mpiasa mitady mpiasa. Afaka manolotra sehatr’asa feno amin’ny fotoana feno izy ireo, amin’ny fotoana sasany, na amin’ny fifanarahana.
Azonao atao ihany koa ny mandefa ireo mitady asa bilo koji amin’ny birao.
Ny fomba tsara indrindra handrafetana ny blôginao: Oglašavanje, Partnerski marketing, fivarotana vokatra sy serivisy.
Contents0.1 "Γεια Τζέρι, ahoana no ahafahako χρειάζομαι bolongana παιχνίδι ny anao?"0.2 Raha mikaroka «διάλεξε
0.1 "Hey Jerry, ahoana no ahafahako manao bolongana leikfang ny anao?"
0.2 Raha mikaroka ‘manao fitoraham-bola amin’ny banky’ ao amin’ny Google ianao, iray amin’ireo valim-pikarohana soso-kevitra atolotr’i Google dia "azonao atao tsara ny mitoraka blaogy". Mampiseho izany fa misy mpikaroka maro tsy ahitam-bokatsoa izay tsy mahalala hoe firy no a Arizonao atao amin’ny bolongana – satria ny soso-kevitr’i Google dia mifototra amin’ny habetsaky ny fehezanteny fototra. Ka ohatrinona no azonao amin’ny alàlan’ny fanaovana bilaogy? Mba hamaliana ny fanontaniana, andao hojerentsika ny Internet. Lindsay sy Bjork avy ao Pinch of Yum dia nanao $ 85.000 mihoatra ny $ 2016 tamin’ny vola miditra (nijanona tsy nizara tarehimarika marina izy ireo taorian’izay). Pat Flynn avy amin’ny Smart Passive Income dia nahazo $ 160.000 $ tamin’ny Desambra 2017. Matthew Woodward kostar $ 25.000 milljónir fyrir $ 2017 og allt árið Desambra. Ný karazana fidiram-bola azoko avy amin’ireto tatitra momba ny fidiram-bola ireto dia: Azo atao izany! Ny mpitoraka blaogy dia manao vola amin’ny Internet, ary Amin’ny hevitra sy paikady mety, tsy misy fetrany ara-bakiteny ny habetsahanao a Arizonao atao ao anaty aterineto. Ity dia mitondra allir amin’ny fanontaniana manaraka … Ahoana no ahazoan’ny mpamaham-bolongana vola? Misy fomba tsy misy fiafaràna mba hahazoana vola avy amin’ny blôginao. Auglýsing borðar. Hlutdeildarfélög mivarotra. Mamorona sy mivarotra ny vokatrao manokana. Famerenana fanatsarana. Inona enginn öruggur tsara indrindra? Arakaraky ny maha-indostrianao anao sy ny toerana misy ny blôginao dia hisy fomba tsara kokoa handraisana ny blôginao. Gael Breton avy amin’ny Authority Hacker dia nanadihady ny fomba fitadiavan’ireo bilaogera 23 amin’ny famahanam-bolongana ary namintina izany Ny fivarotana ny vokatrao manokana dia, amin’ny ankapobeny, tena mahasoa indrindilao (jere). ViðskiptamódelTotal vola miditraFandaniana tanterakaHagnaður Hagnaðarframlegð Þjónusta 21.508 $ 2.805 dali 18.703 dali 666% Auglýsingasala 235.977 $ 135 $, 041 $ 100, 936 74% Tengd markaðssetning 214.232 dalir 47.664 dalir 166.568 $ 349% Ny vokatra mivarotra 434.004 $ 113.767 dali 320.237 dali 281% Ny saram-pitsaboana matetika dia sarotra ny mivarotra ary noho izany dia miteraka latsaky ny fidiram-bola ny Tombony azo antoka. Maro amin’ireo mpitoraka blaogy ambony no manao bilaogy mivantana sy mivarotra. Ny varotra an-tserasera dia mamokatra vola be (2. best), fa noho ny mpivarotra adiresy hamokatra votoaty marobe ary indraindray mahazo ny fifamoivoizana, dia mihena haingana ny marika. Samband ara-barotra no tena tetikasam-pihariana mahomby indrindra, izay mahatonga azy ho tsara ho an’ny mpamaham-bolongana vaovao izay mila manangom-bola haingana. Ity tranonkala ity dia natokana ho an’ny fidiram-bola avy amin’ny fiarahamonim-pirenena – ary nahavita nitombo avy amin’ny bilaogy iray-olona iray izahay ho an’ny ekipan’ny tonian-dahatsoratra iray, bilaikaay mary mpivarotra fjölmiðill sosialy roa. Ny fivarotana vokatra ho an’ny vokatra dia mamokatra ny vola miditra indrindra amin’ny marika tombontsoa lehibe. Ny marika dia kely ambany noho ny fivarotana tokotany noho ny vidiny mifandraika amin’ny serivisy mpanjifa, ny fanodinana fandoavam-bola, sns., Fa ny tahan’ny fivoarana avo lenta dia manome izany ho an’ny # 1 loharanom-bola azo antoka ho an’ny mpitoraka blaogy. Hanomboka Raha mamaky mandra-pahatongan’ity dia mbola tsy manana bilaogy ianao… dia tsy maintsy misitrika loha ianao izao. Fa maninona no tsy nanomboka teo aloha ianao? Eny ary, mbola tsy tara raha nitsambikina tao. Ity ny ahy dingana iray amin’ny dingana vita amin’ny fomba hamoronana blaogy eto. Vakio ity ary aloha ary miverena amin’ity torolalana manaraka ity. Hiandry Ah! Allt í lagi! Koa ankehitriny dia vonona ny blôginao ary isika rehetra dia napetraka ho an’ny volamena … Ahoana no ahafahanao manao bilaogy vola, ho an’ny tena?
2.7 Inona engin misimisy kokoa amin’ny gögn gögn?
3 Markviss umferð
3.2 1. Gestapóstur
3.5 Hugmynd nr. 3: Manomàna birao iray
4.1 Aðgerð að gera!
"Hey Jerry, ahoana no ahafahako manao bolongana leikfang ny anao?"
Ny sasany maniry manomboka blôgy ary manao fidiram-bola kely amin’ny aterineto. Ny hafa, handositra ny fitohanan’ny fiara miasa, na hanitatra ny orinasa an-tserasera, na hiala amin’ny asa 9 til 5, sns.
Tena maniry ny hanampy ireo izay fantatro aho. Ennfremur, ég vil líka að þú getir spilað leikfang leikföng fyrir öll skilaboð frá fivoriana sem þú vilt að Whatsapp á Facebook Messenger.
Noho izany, manoratra ity lahatsoratra ity aho mba hizara lesona nianarako ho leikfang ny mpamaham-bolongana nandritra ny taona 15 farany.
Mampiseho izany fa misy mpikaroka maro tsy ahitam-bokatsoa izay tsy mahalala hoe firy no a Arizonao atao amin’ny bolongana – satria ny soso-kevitr’i Google dia mifototra amin’ny habetsaky ny fehezanteny fototra.
Lindsay sy Bjork avy ao Pinch of Yum dia nanao $ 85.000 mihoatra ny $ 2016 tamin’ny vola miditra (nijanona tsy nizara tarehimarika marina izy ireo taorian’izay).
Pat Flynn avy amin’ny Smart Passive Income dia nahazo $ 160.000 $ tamin’ny Desambra 2017.
Matthew Woodward kostar $ 25.000 milljónir fyrir $ 2017 og allt árið Desambra.
Ný karazana fidiram-bola azoko avy amin’ireto tatitra momba ny fidiram-bola ireto dia:
Amin’ny hevitra sy paikady mety, tsy misy fetrany ara-bakiteny ny habetsahanao a Arizonao atao ao anaty aterineto.
Ity dia mitondra allir amin’ny fanontaniana manaraka …
Auglýsing borðar. Hlutdeildarfélög mivarotra. Mamorona sy mivarotra ny vokatrao manokana. Famerenana fanatsarana.
Inona enginn öruggur tsara indrindra?
Gael Breton avy amin’ny Authority Hacker dia nanadihady ny fomba fitadiavan’ireo bilaogera 23 amin’ny famahanam-bolongana ary namintina izany Ny fivarotana ny vokatrao manokana dia, amin’ny ankapobeny, tena mahasoa indrindilao (jere).
ViðskiptamódelTotal vola miditraFandaniana tanterakaHagnaður Hagnaðarframlegð
Þjónusta 21.508 $ 2.805 dali 18.703 dali 666%
Auglýsingasala 235.977 $ 135 $, 041 $ 100, 936 74%
Tengd markaðssetning 214.232 dalir 47.664 dalir 166.568 $ 349%
Ny vokatra mivarotra 434.004 $ 113.767 dali 320.237 dali 281%
Ny varotra an-tserasera dia mamokatra vola be (2. best), fa noho ny mpivarotra adiresy hamokatra votoaty marobe ary indraindray mahazo ny fifamoivoizana, dia mihena haingana ny marika.
Samband ara-barotra no tena tetikasam-pihariana mahomby indrindra, izay mahatonga azy ho tsara ho an’ny mpamaham-bolongana vaovao izay mila manangom-bola haingana. Ity tranonkala ity dia natokana ho an’ny fidiram-bola avy amin’ny fiarahamonim-pirenena – ary nahavita nitombo avy amin’ny bilaogy iray-olona iray izahay ho an’ny ekipan’ny tonian-dahatsoratra iray, bilaikaay mary mpivarotra fjölmiðill sosialy roa.
Allt í lagi! Koa ankehitriny dia vonona ny blôginao ary isika rehetra dia napetraka ho an’ny volamena …
Ny votoatiny er 50% fotsiny ny lalao, raha kely indrindra.
Ný lesona amin’ity: Na inona na inona ny fanoratana tsara ny votoatinao na ny hatsaranao ny endrikao ny bilaoginao – raha tsy manapa-tsakafo mahasoa anao ianao, dia tsy ho afaka hampiova ny ezaka vitanao amin’ny vola.
Nahoana engin mitranga einhver amin’ny banky ny tranga leikfang ízany? Satria izany no vola.
Ireto misy fitaovana vitsivitsy a Arizonao ampiasaina mba hahafantarana raha mandany vola ny mpizarazara (ary ny tena zava-dehibe, ny vola lany).
Manaova fikarohana mifandraika amin’ny nichanao Google eða Bing. Misy dokam-barotra ve ao amin’ny pejin’ny valin’ny fikarohana?
Azonao ampiasaina avy eo Google Planet lykilorð skipuleggjandi Manoritsoritra ny vidin’ny sainam-pirinty ho an’io fikarohana io ary maminavina hoe ohatrinona no azonao atao amin’ny Google Adsense smellur *; ary noho izany, ohatrinona no a Arizonao atao amin’ny fivarotana habaka adirey.
Mariho fa tsy misy fitipika mazava an-tsoratra fa fanombantombanana be loatra, Google er frá 30 – 50% af nýjum smellum AdSense útgefendur.
Fomba iray hafa hamaritana hoe ohatrinona (ary ny tena zava-dehibe indrindra, raha) Mandany ny dokam-barotra borga fyrir hvern smell (PPC) Nýtt efni er SpyFu.
Ny sary eto ambany dia ohatra sasantsasany izay hitako tamin’ny Spyfu Ókeypis leit. Ny tsirairay amin’ireo fikarohana ireo dia latsaka kely noho ny minitra 5 mba hamitana azy – ary azoko fantarina ny Tombom-barotry ny niche amin’ny fandinihana ireo antontan-taratasy ireo. Misy tsipirian-javatra sarobidy kokoa raha toa ka mihoatra ny fikarohana malalaka isika saingy hifikitra amin’ny famoahana maimaim-poana amin’izao fotoana izao. Mba hanaovana ny fikarohana ataonao dia tsindrio fotsiny amin’ny mpifaninana anao (na ireo mpilalao lehibe ao amin’ny sainanao) amin’ny fikarohana.
Ny tena fiainana smábátahöfn # 1 – $ 64.000 / mo Admin
Veggskot nr. 1 – vokatra malefaka, vahaolana raharahambarotra. Misy mihoatra ny orinasa hafa an’ny 10 izay manolotra fandaharam-pikambanana ao amin’ity orinasa ity. Spyfu nanombantombana fa ity mpivarotra ity dia mandany $ 64.000 amin’ny Adwords isam-bolana.
Veggskot nr. 2 – $ 100.000 / mán Adwords
Veggskot nr. 2 – Fanatanjahantena ara-panatanjahantena – mieritrereta marika ara-panatanjahantena leikfang í Adidas, Nike, ary New Balance, þar sem allt er eins og kely kokoa ary mifantoka amin’ny karazana fanatanjahantena. Ity orinasa ity dia mandany mihoatra ny $ 100.000 isam-bolana amin’ny tenifototra maherin’ny 57.000 araka ny Spyfu.
Veggskot nr. 3 – $ 60.000 / mán Adwords
Veggskot nr. 4 – $ 9.500 / mán Adwords
Veggskot nr. 4 – Mpanome tolotra tranonkala. Ity orinasa ity dia iray amin’ireo fanombohana mahazatra vitsivitsy taona vitsy lasa izay. (Gaga aho mahita azy ireo mandany efa ho 10.000 $ isam-bolana amin’ny AdWords).
Veggskot nr. 5 – $ 71.500 / mo Admin AdWords
Veggskot nr. 5 – Vokatra ara-bola manerantany. Ny sary nalaina dia ny fanadihadiana iray amin’ny iray amin’ireo mpilalao lehibe indrindra amin’ity sambo ity. Nanana tranonkala roa tao amin’ity orinasa ity aho niverina tao amin’ny 2000 – tsy ho gaga raha mahita orinasa mandany mihoatra ny $ 100.000 isam-bolana amin’ny adwords.
Veggskot 6 – $ 24.200 / mo Admin AdWords
Veggskot nr. 6 – Mpanome tolotra tranonkala. Ity tranonkala ity dia tranonkala iray ary tsy mivarotra ny vokany manokana. Ny tompon’ny tranokala dia mandany vola mihoatra ny $ 20.000 isam-bolana amin’ny dokambarotra PPC.
Fomba iray hafa ampiasaiko matetika mba hitsaràna ny tombotsoan’ny sess iray dia mijery ireo isa ao Commission Junction (CJ).
Azonao ampiasaina ny vola harenina (barazy maitso) ho leikfang ny mety ho endriky ny karama.
Fandanian’ny tambajotra = Manao ahoana ny habetsahan’ny mpividy raha oharina amin’ny ankapobeny. Hahazoana harena ambony kokoa = fidiram-bola bebe kokoa amin’ny programa; Volan’ny 3 EPC = salanisa isaky ny klioba 100 = Tombony azo antoka dia ity programa afiliana ity amin’ny fotoana maharitra; 7 andro EPC = salanisa isaky ny klioba 100 = ity vokatra ity?
Ny haino aman-jery sosialy lehibe indrindra eran’izao tontolo izao dia tena fitaovana lehibe hahafahanao manazava ny vaika vaovao azonao. Fantaro bebe kokoa momba ny mpihaino kendrena anao, ampio ny mpifaninana aminao, tadiavo ny zoro iray hamehezana ny nich anao, sy ny sisa.
Mifandraisa am-piangonana Facebook hópur – Vakio ny resadresaky ny mpampiasa mba hahatakatra ny olana sy ny filany.
Ho an’ireo izay manana pejy Facebook dia mandehana ao amin’ny Innsýn> Yfirlit> Pejy ho Watch. Ity no hitanao ary ampitahao ireo pejy mitovy soso-kevitry Facebook. Azonao atao tsindriana amin’ny rohy tsirairay mba hahitanao ireo lahatsoratra malaza stigaka tao amin’ireo pejy ireo.
Misy zavatra maro a Arizonao atao miaraka amin’ny lisitr’ireo mpifaninana sy ny antsipirian’ny mpankafy izay anananao.
Íreto misy soso-kevitra sasantsasany:
Manorata lohateny lehibe sy votoatim-baovao – Fantaro hoe iza amin’ireo lahatsoratra ao amin’ny Facebook no mahazo ny fidirana ambony indrindra, manorata lohateny leikfang izao.
Ny lavaka hraun vava amin’ny teny malemy (kredit: Alefaso any amin’ny Fox).
Inona engin misimisy kokoa amin’ny gögn gögn?
Saingy satria fantatry ny ankamaroan’ny mpividy mpividy – Betaka kokoa ny mampiasa io tahirin-teny fototra io. Miaraka amin’ny votoatin-teny manan-danja dia azontsika atao ihany koa ny mahatakatra ity manaraka ity kokoa (ary mety ho hita koa ny fahafaha-manao fandraharahana vaovao):
Fikarohana bebe kokoa = fangatahana metnaður; Valiny misimisy kokoa no niverina tao amin’ny pejy valin’ny fikarohana = fanampiny.
Ohatra: Ho an’ny fakantsary – Nikon, Canon, Sony; ho an’ny mariazy – Balí, Maldíveyjar, Hawaii; ho an’ny tranonkala – iPage, BlueHost, Hostgator; ho an’ny olo-malaza – Taylor Swift, Linkin Park, Bruno Mars.
Amin’ny ankapobeny, ny fividianana mividy dia forðast kokoa raha vera ný karoka momba af ‘famerenan’ny búnaður’, ‘ny sarisary modely ary ny anarana’, ’10 besta búnaður vörumerki’, ‘mividy búnaður á netinu’. Mifanohitra amin’izany, ny fikarohana momba ny ‘tantaram-pifandraisana’, ‘fitarainana búnaður’, í ‘fanaovana Widget’ sem þú þarft að nota til að fá ara-barotra.
Tamin’ny fotoana voalohany nanombohako, maro ireo vefstjóra (mariho – dia mbola niankina tamin’ny fitaovana iray antsoina hoe "Overture") – izay ahafahanao mametraka fomba fikarohana tsotra fotsiny ny ‘mpitoraka blaogy’ ary ny rafitra dia hanome endrika sarotra anao indraindray io teny io dia mikaroka, maimaim-poana. Aminay dia ampitahao ireo isa ireo miaraka amin’ny habetsaky ny valim-pifidianana ary hitsara ny fifaninanana (ary ny arðsemi) amin’ny sess.
Ný Google lykilorð skipuleggjandi er óákveðinn greinir í ensku amin’ireo fitaovana maotina vitsivitsy ampiasaiko amin’izao myndana izao (rah a Arizonao atao ny mandoa vola, manoro hevitra AHREFS ary Aza maimaika).
Ny sarimihetsika filma dia iray amin’ireo zanako indrindra. Tsy manangona azy ireo aho fa mankasitraka ny hatsaran’ny zavakanto sy ny fahatsiarovan-tena ao amin’izy ireo. Andeha hojerentsika raha afaka mampitodika ny fahalianako amin’ny hevitra bilaogy mahasoa izahay. Mariho fa tsy nanao fikarohana aho talohan’ny nanoratako ity torolàlana ity – ka dia mahaliana ahy leikfang ny amin’izao fotoana izao.
Mba hahatakarako tsara kokoa ny tabilao, matetika aho dia mampitaha ny fironana tsy fantatra amin’ny zavatra fantatro. Amin’ity ohatra ity dia nampidiriko ny teny hoe "fanamarinana hýsing". Hitanao fa misy olona maro kokoa mitady "afisy sarimihetsika".
Google Planet lykilorð skipuleggjandi
Avy eo, handha ho any amin’ny Google lykilorð planer izahay mba hahazo hevitra bebe kokoa.
Tsindrio ao amin’ny "sarimihetsika" amin’ny sarimihetsika ary tsindrio "Fáðu hugmynd".
Ny pejy voalohan’ny pejy (jereo eto ambany) dia mampiseho fa maro ireo karazana fikarohana amin’ny sarimihetsiketsa momba ny sarimihetsika (fandaharana 41,900 + isam-bolana), horonantsary sarimihetsika horonantsonarana sarimihetsika sarimihetsika, sarimihetsika malaza (3.400 + horonantsary fikarohana), Hollywood afisy sarimihetsika (Fikarohana 1.600 + isam-bolana), sy ny sisa. Misy ihany koa ny fangatahana forðast lenta kakaó momba ny famoronana ny sarimihetsika fimailo (~ 22.000 fikarohana).
Endri-tsoratra manan-danja amin’ny Google kort lykilskipuleggjandi.
Mba handshanana lalindalina kokoa dia azontsika atao ny manindry ny tenimiafina amin’ny antsipiriany bebe kokoa. Ity no ahafahantsika mahatakatra kokoa ny fikasan’ny mpikaroka. Tandremo ny karazana fampahalalana hitan’ny mpikaroka.
Fehezanteny manan-danja ahitana ny "Búðu til veggspjald" – ireo mpikaroka ireo no tena mitady ny lesona sy fitaovana fanontam-pirinty.
Miverina hvaða Google leit sem er
Ahoana raha tsy te hivarotra vokatra ara-batana isika? Fantatrao – tsy dia mahafinaritra loatra ny fanodinana sy ny flutninga. Afaka miblaogy sy mivarotra sehatra dokam-barotra fotsiny ve isika? Mba hamaliana ity fanontaniana ity dia andramo ny fikarohana sasantsasany ao amin’ny Google arry hijerena raha afaka mahita ny mpizarazara na ny programa afiliana isika.
Azonao atao ihany koa ny mijery akaiky ny dokam-barotra amin’ny dokam-barotra amin’ny dokambarotra – má ég ekki sjá um mamorona dokam-barotra eny an-dalam-pikarohana? Raha eny, inona ny bilaogy? Afaka mivarotra mivantana mivantana amin’ireo mpivarotra ve ianao? Manome toky ny tombombaran’ity lohahevitra ity, dia afaka mampihatra ity data ity fanalahidy ity amin’ny Spyfu izahay mba hamaritana hoe firy ny mpizarazara no mandany.
Mba handinihana lalindalina kokoa, mety te-hibitsika amin’ny valin’ny fikarohana biolojika isika (tranokalan’ny rohy, ny fanatsaràna ny onjam-peo, ny haino aman-jery sosialy, sns.) Mba hahitana ny fahasarotin-pah fifaninanana momba ny SEO.
Nýtt fimmaninanana SEO
Ankehitriny dia manana ny tsenan’ny tsena rehetra ilaina isika – fotoana hanapahan-kevitra. Tokony hitsambikina ve isika? Tena tsara tokoa ve izany? Inona engin mety ho fiantraikany amin’ny fanatonana izany? Havelako ho anao ny fanatsoahan-kevitra.
Zavatra iray, na izany aza, maniry ny hamoaka mazava aho alohan’ny hamaranana ity fizarana ity – dia ny momba ny fanapahan-kevitrao amin’ny sess.
Hifindra amin’ny lanjan’ny singa # 2: Miðaðar miðaðar izao isika
Ny fitohanan’ny fifamoivoizan’ny blôginao dia ny vola bebe kokoa a Arizonao atao.
Kitapom-pahefana tsotra izany – Aleo lazaina fa ianao dia mitantana bilaogy DIY sy mivarotra zavakanto. Nýtt aðdáandi frá blóginao er 3% ari ny sandan’ny fanovana er $ 25 $. isan’ireo mpitsidika manana lasibatra, avy eo ny teorika dia hisy fivarotana enina ary $ 150 mahasoa ny lalana.
Miankina amin’ny toetran’ny sainao sy ny fahaiza-misaina, a Arizonao atao ny mijery ny karazana statistika samihafa.
Ítaro ny nomerao efatra amin’ny Google Analytics:
Fundir / notendur keyptir
Sampan-draharahan’ny fifamoivoizana / tilvísun
Google Analytics (öflun> Ny fifamoivoizana> Loharano / Fampahalalana)
(Mba hahitana ity nomerao ity dia midira ao amin’ny Google Analytics mælaborð> Fitondràna> Innihald síðunnar> Allar síður.)
Araka ny hitanao – Ný mpampiasa dia mandany fotoana bebe kokoa amin’ny sasany amin’ireo pejy ireo (isa ambany) raha oharina amin’ny habaka amin’ny habaka.
Ný mynd af hraunkakó í amin’ny pejy dia midika hoe:
Habezotra bebe kokoa amin’ny fanatsarana kokoa amin’ny Google (enn frekar en fiantraikan’ny tranonkala eo amin’ny sehatra Google á ný Google)
Ny fanalahidin’ny fahombiazana, raha ny fahitako azy, dia ny mahita ireo bilaogy tsara – ireo izay manana mpamaky marina sy mpanaraka ny media sosialy. Azonao ampiasaina Topsy eða Buzz Sumo ny mahita ireo bilaogy malaza sy ny mpikatroka ao amin’ny orinasanao. Na, afaka mandinika akaiky ny faritra fanehoan-kevitra ianao raha te hahalala raha mifanerasera amin’ireo bilaogera ireo mpamaky. Aza hadino hatrany fa mitoraka blaogy ho an’ny mpamaky tena ianao (noho izany dia zava-dehibe ny kalitao atiny). Aza hadino ny mandefa bilaogy manana Google PR forðast lenta fa ny mpamaky tsy misy fiasa – tsy mandeha amin’ny 2015 intsony ity fanao ity.
20 toro-hevitra ara-tsosialy fjölmiðlar sosialy avy amin’ny manam-pahaizana
Manontany ny manam-pahaizana 30 mba hahazoana mpanaraka bebe kaka Twitter
Ný fitaovana SEO tsara indrindra natolotry ny manam-pahaizana momba ny indostria
Nýtt Facebook er notað til að nota ($ 0,06 $ / tranonkala hidirana amin’ny indostria sasany) með Hanintonana mpitsidika vaovao. Nýtt mynd af sarotra amin’ny dokam-barotra Facebook þú vilt hvernig mila mandinika vera loatra ianao (adiresy an-tserasera, firenena samihafa, tombontsoa samihafa, sns) mba hahombiazana.
Atsaharo ny fotoana isan’andro hanoratana. Aza olona manomboka manao ebook ary tsy mamita azy mihitsy. Sakano ora iray isan’andro, roa ora, 15 míníta – tsy olana na firy na firy. Soraty fotsiny io.
Alefaso amin’ny hóflega ebook tsara izany. Ireto misy vitsivitsy avy amin’i HubSpot.
Manamboara kápa (þ.e. Canva) na mandoa an-tserasera iray hanao izany (mpamorona iray tsy miankina ~ $ 26 / araina araka ny fijeriko ny fandaniana)
Tengslamarkaðssetning með meto ho loharanom-bola lehibe ho an’ny asa fanampiny fanampiny. Jereo ireto hevitra ireto mba hampidirana ny varotra afrikana amin’ny fidiranao:
Alefaso aloha ireo lahatsoratra efa navoakany sy tadiavo ireo vokatra na serivisy voalazanao. Raha vao hitanao izy ireo, mandehana fotsiny hvaða amin’ny tranokala tsirairay ary mitadiava pejy "Aðildarfélög".
Rehefa mitsidika er URL URL miaraka amin’ny ID ny mpitsidika iray ary mividy ny vokatra dia hahazo vola ianao.
Mandehana allir amin’ny tranokalan’ny vokatra tsirairay ary jereo raha manana pejy mifandray izy ireo. Raha manao izany izy ireo, misoratra anarana amin’ny programa.
Te-hampiasa vokatra iray ianao fa tsy afaka manome izany? Ahoana raha a Arizonao atao ny mamerina ny volanao ao anatin’ny fotoana fohy?
Voalohany, ataovy lisitry ny vokatra / tolotra tianao hampiasaina. Avy eo dia mandehana allir amin’ny vohikalany ary jereo raha manana programa afilialy ry zareo.
Ireo lahatsoratra ireo dia afaka mijanona ho mavitrika mandritra ny fotoana hraun, ka mitondra fidiram-bola ho an’ny fiainan’ny lahatsoratra tsirairay.
4- Mampirisika ny vokatra avy amin’ny fikambanana amin’ny mailaka sjálfvirkur svarari
Ny mailaka dia fitaovana markaðssetning markaðsherbergja. Iray amin’ireo fantsona vitsivitsy arahin’ny olona isan’andro izy io vonona ny hivarotra.
Ny mailaka sjálfvirkur svarari er fanodinana maimaim-poana amin’ny mailaka izay alefa amin’ny olona rehefa misoratra anarana amin’ny lisitry ny mailakao.
Íreto ny tolotra roa tiako indrindra:
Það er enginn soso-kevitrao amin’ny sjálfvirkur svarari anao:
Mipetraha amin’ny fifandraisana fananganana mailaka, leikfang ny fangatahana ireo mpandray anao raha afaka manampy azy ireo amin’ny zavatra ianao. Hanorina fitokisana koa izany ary hampihenana ny anaran’ny soratra.
Rehefa mampiroborobo ny vokatra dia mifantoha amin’ny valiny azony azony fa tsy ilay vokatra fotsiny. Raha mahazo valiny ianao amin’ny fampiasana azy, dia ho a Arizonao antoka fa hazavainao amin’ny an-tsipiriany ireo. Það er engin hana ny varotra ho anao.
Hugmynd nr. 3: Manomàna birao iray
Tafiditra ao amin’ny birao starf ny mpiasa mitady mpiasa. Afaka manolotra sehatr’asa feno amin’ny fotoana feno izy ireo, amin’ny fotoana sasany, na amin’ny fifanarahana.
Ný fomba tsara indrindra handrafetana ny blôginao: Auglýsingar, tengd markaðssetning, fivarotana vokatra sy serivisy.
Aðgerð að gera!
Maro ireo tonga nanatona ahy tamin’ny lasa izay nanana loharano amper (fahaiza-manao, fahalalana, fotoana) hanombohana bilaogy sy vola. Saingy tsy nahomby izy ireo – satria mbola nanana fialantsiny ihany koa izy ireo hanemotra ny tetikasany ary hiandry ny kintana hifanaraka.
0.1 "سلام جری ، ahoana no ahafahako manao bolongana toy ny anao?"
0.2 Raha mikaroka ‘manao fitoraham-bola amin’ny banky’ ao amin’ny Google ianao، iray amin’ireo valim-pikarohana soso-kevitra atolotr’i Google dia "azonao atao tsara ny mitoraka blaogy". Mampiseho izany fa misy mpikaroka maro tsy ahitam-bokatsoa izay tsy mahalala hoe firy no azonao atao amin’ny bolongana – satria ny soso-kevitr’i Google dia mifototra amin’ny habetsaky n fehezanteny fototra. Ka ohatrinona no azonao amin’ny alàlan’ny fanaovana bilaogy؟ Mba hamaliana ny fanontaniana، andao hojerentsika ny Internet. Lindsay sy Bjork avy ao Pinch of Yum dia nanao 85،000 $ mihoatra و 2016 $ tamin’ny vola miditra (nijanona tsy nizara tarehimarika marina izy ireo taorian’izay). درآمد ناخواسته Smart Flyive ، درآمد 160،000 دلار tamin’ny Desambra 2017. متیو وودوارد dia nanao 25،000 $ mihoatra و 2017 $ tamin’ny volana Desambra. Ny karazana fidiram-bola azoko avy amin’ireto tatitra momba ny fidiram-bola ireto dia: آزو Atao izany! Ny mpitoraka blaogy dia manao vola amin’ny Internet، ary Amin’ny hevitra sy paikady mety، tsy misy fetrany ara-bakiteny ny habetsahanao azonao atao ao anaty aterineto. Ity dia mitondra any amin’ny fanontaniana manaraka … Ahoana no ahazoan’ny mpamaham-bolongana vola? Misy fomba tsy misy fiafaràna mba hahazoana vola avy amin’ny blôginao. تبلیغات بنر. وابسته به mivarotra. Mamorona sy mivarotra ny vokatrao manokana. Famerenana fanatsarana. Inona no safaray tsara indrindra? Arakaraky naha maha-indostrianao anao sy ny toerana misy ny blôginao dia hisy fomba tsara kokoa handraisana ny blôginao. گت برتونی avy amin’ny Authority Hacker dia nanadihady ny fomba fitadiavan’ireo bilaogera 23 amin’ny famahanam-bolongana ary namintina izany Ny fivarotana ny vokatrao manokana dia، amin’ny ankapobeny، tena mahasoa indrindra (jereotsy ty tabi). مدل کسب و کارTotal volit miditraFandaniana tanterakaProfitProfit Margin خدمات $ 21،508 $ 2،805 18،703 دلار 666٪ آگهی فروش 235.977 دلار 135 دلار ، 041 100 دلار ، 936 74٪ بازاریابی وابسته 214،232 دلار 47،664 دلار 166،568 دلار 349٪ Ny vokatra mivarotra 434،004 دلار 113،767 دلار 320،237 دلار 281٪ Ny saram-pitsaboana matetika dia sarotra ny mivarotra ary noho izany dia miteraka latsaky ny fidiram-bola ny tombony azo antoka. Maro amin’ireo mpitoraka blaogy ambony no manao bilaogy mivantana sy mivarotra. Ny varotra an-tserasera dia mamokatra vola be (2nd best)، fa noho ny mpivarotra adiresy hamokatra votoaty marobe ary indraindray mahazo ny fifamoivoizana، dia mihena haingana ny marika. Affociation ara-barotra no tena tetikasam-pihariana mahomby indrindra، izay mahatonga azy ho tsara ho an’ny mpamaham-bolongana vaovao izay mila manangom-bola haingana. Ity tranonkala ity dia natokana ho an’ny fidiram-bola avy amin’ny fiarahamonim-pirenena – ary nahavita nitombo avy amin’ny bilaogy iray-olona iray izahay ho an’ny ekipan’ny tonian-dahatsoratra iray، alaaaaaaaaaaaaaaa، aryaaaaaaa رسانه های mpivarotra sosialy roa. Ny fivarotana vokatra ho an’ny vokatra dia mamokatra ny vola miditra indrindra amin’ny marika tombontsoa lehibe. Ny marika dia kely ambany noho ny fivarotana tokotany noho ny vidiny mifandraika amin’ny serivisy mpanjifa، ny fanodinana fandoavam-bola، sns.، Fa ny tahan’ny fivoarana Avto lenta dia manome izany ho an’ny # 1 aohoma هو آنی mpitoraka blaogy. هانومبوکا Raha mamaky mandra-pahatongan’ity dia mbola tsy manana bilaogy ianao… dia tsy maintsy misitrika loha ianao izao. Fa maninona no tans nanomboka teo aloha ianao? Enry ary، mbola tsy tara raha nitsambikina tao. ity ny ahy dingana iray amin’ny dingana vita amin’ny fomba hamoronana blaogy eto. Vakio ity ary aloha ary miverena amin’ity torolalana manaraka ity. سلام هانری باشه! Koa ankehitriny dia vonona ny blôginao ary isika rehetra dia napetraka هو an’ny volamena … Ahoana no ahafahanao manao bilaogy vola، ho an’ny tena?
1 تامبانانا تارا
2 Ahoana no ahitanao milina masasoa?
2.1 Fomba شماره 1: Manaraha n vola
2.2 موتورهای جستجو
2.4 محل اتصال کمیسیون
2.5 Fomba شماره 2: Facebook
2.6 Fomba شماره 3: Fikarohana fikarohana teny amin’ny sekoly fanabeazana taloha
2.7 اینونا داده داده kokoa amin’ny غلط نیست?
3 ترافیک هدفمند
3.2 1. ارسال مهمان
3.3 3. فیس بوک Adiresy
3.5 ایده شماره 3: Manomàna birao iray
4 TL؛ DR / ماندروسو
4.1 ماکارا اکشن!
"سلام جری ، ahoana no ahafahako manao bolongana toy ny anao?"
Ny sasany maniry manomboka blôgy ary manao fidiram-bola kely amin’ny aterineto. Ny hafa، handositra ny fitohanan’ny fiara miasa، na hanitatra ny orinasa an-tserasera، na hiala amin’ny asa 9-5، sns.
Tena maniry n hanampy ireo izay fantatro aho. Saingy ، izaho dia afaka mizara betsaka toy toy izany na mandritra ny fivoriana ataon’ny olona na Whatsapp na Facebook Messenger.
noh izany، manoratra ity lahatsoratra ity aho mba hizara lesona nianarako هو اسباب بازی ny mpamaham-bolongana nandritra n ta taona 15 farany.
Raha mikaroka ‘manao fitoraham-bola amin’ny banky’ ao amin’ny Google ianao، iray amin’ireo valim-pikarohana soso-kevitra atolotr’i Google dia "azonao atao tsara ny mitoraka blaogy".
Mampiseho izany fa misy mpikaroka maro tsy ahitam-bokatsoa izay tsy mahalala hoe firy no azonao atao amin’ny bolongana – satria ny soso-kevitr’i Google dia mifototra amin’ny habetsaky n fehezanteny fototra.
Ka ohatrinona no azonao amin’ny alàlan’ny fanaovana bilaogy؟ Mba hamaliana ny fanontaniana، andao hojerentsika ny Internet.
Lindsay sy Bjork avy ao Pinch of Yum dia nanao 85،000 $ mihoatra و 2016 $ tamin’ny vola miditra (nijanona tsy nizara tarehimarika marina izy ireo taorian’izay).
درآمد ناخواسته Smart Flyive ، درآمد 160،000 دلار tamin’ny Desambra 2017.
متیو وودوارد dia nanao 25،000 $ mihoatra و 2017 $ tamin’ny volana Desambra.
آزو Atao izany! Ny mpitoraka blaogy dia manao vola amin’ny Internet، ary
Amin’ny hevitra sy paikady mety، tsy misy fetrany ara-bakiteny ny habetsahanao azonao atao ao anaty aterineto.
تبلیغات بنر. وابسته به mivarotra. Mamorona sy mivarotra ny vokatrao manokana. Famerenana fanatsarana.
Inona no safaray tsara indrindra?
Arakaraky naha maha-indostrianao anao sy ny toerana misy ny blôginao dia hisy fomba tsara kokoa handraisana ny blôginao.
گت برتونی avy amin’ny Authority Hacker dia nanadihady ny fomba fitadiavan’ireo bilaogera 23 amin’ny famahanam-bolongana ary namintina izany Ny fivarotana ny vokatrao manokana dia، amin’ny ankapobeny، tena mahasoa indrindra (jereotsy ty tabi).
مدل کسب و کارTotal volit miditraFandaniana tanterakaProfitProfit Margin
خدمات $ 21،508 $ 2،805 18،703 دلار 666٪
آگهی فروش 235.977 دلار 135 دلار ، 041 100 دلار ، 936 74٪
بازاریابی وابسته 214،232 دلار 47،664 دلار 166،568 دلار 349٪
Ny vokatra mivarotra 434،004 دلار 113،767 دلار 320،237 دلار 281٪
Ny varotra an-tserasera dia mamokatra vola be (2nd best)، fa noho ny mpivarotra adiresy hamokatra votoaty marobe ary indraindray mahazo ny fifamoivoizana، dia mihena haingana ny marika.
Affociation ara-barotra no tena tetikasam-pihariana mahomby indrindra، izay mahatonga azy ho tsara ho an’ny mpamaham-bolongana vaovao izay mila manangom-bola haingana. Ity tranonkala ity dia natokana ho an’ny fidiram-bola avy amin’ny fiarahamonim-pirenena – ary nahavita nitombo avy amin’ny bilaogy iray-olona iray izahay ho an’ny ekipan’ny tonian-dahatsoratra iray، alaaaaaaaaaaaaaaa، aryaaaaaaa رسانه های mpivarotra sosialy roa.
Ny fivarotana vokatra ho an’ny vokatra dia mamokatra ny vola miditra indrindra amin’ny marika tombontsoa lehibe. Ny marika dia kely ambany noho ny fivarotana tokotany noho ny vidiny mifandraika amin’ny serivisy mpanjifa، ny fanodinana fandoavam-bola، sns.، Fa ny tahan’ny fivoarana Avto lenta dia manome izany ho an’ny # 1 aohoma هو آنی mpitoraka blaogy.
Fa maninona no tans nanomboka teo aloha ianao?
Enry ary، mbola tsy tara raha nitsambikina tao.
باشه! Koa ankehitriny dia vonona ny blôginao ary isika rehetra dia napetraka هو an’ny volamena …
Ahoana no ahafahanao manao bilaogy vola، ho an’ny tena?
"ماناوا ny votoatiny tsara؛ ny vola sy ny fifamoivoizana dia hanaraka, "hoy ilay manam-pahaizana.
Ny votoatiny dia 50٪ fyat ny lalao، raha kely indrindra.
Eny، amin’ny maha mpamaham-bolongana azy، adidinay ny mamorona votoaty mba hitazonana ireo mpamaky anay.
Fa mba hahazoana vola amin’ny farany، tokony hanana singa manan-danja roa hafa ianao – tondra-drivotra azo antoka sy tratran’ny tranonkala.
Raha vao nanomboka ny asako tamin’ny maha-mpivarotra Internet ahy aho، dia nanao tranokalam-pikambanana iray aho mba hivarotra sambo marefo. Azonareo an-tsaina ve hoe آتشین ny olona mividy سامبو marefo aty anaty aterineto?
Ny ratsy indrindra، ity vokatra ity dia vokatra ara-tsakafo ary mivarotra ihany mandritra ny fahavaratra، noho izany dia mbola voafetra ihany aho tamin’ny fivarotako. Ny habaka dia tsy mihoatra ny varotra roa isan-taona. آواز Tsy ny fotoanako hanorenana an’io tranonkala io.
Ny lesona amin’ity: Na inona na inona ny fanoratana tsara ny votoatinao na ny hatsaranao ny endrikao ny bilaoginao – raha tsy manapa-tsakafo mahasoa anao ianao، dia tsy ho afaka hampiova n ezaka vitanao amin’ny vola.
Ahoana no ahitanao milina masasoa?
Fomba شماره 1: Manaraha n vola
Nahoana no mitranga no amin’ny banky ny tranga اسباب بازی izany؟ Satria izany no vola.
Ireto misy fitaovana vitsivitsy azonao ampiasaina mba hahafantarana raha mandany vola ny mpizarazara (ary ny tena zava-dehibe، ny vola lany).
Manaova fikarohana mifandraika amin’ny nichanao گوگل یا بینگ. Misy dokam-barotra ve ao amin’ny pejin’ny valin’ny fikarohana?
اواترا: Ny valin’ny fikarohana ao Bing amin’ny floristan’i Londres.
Azonao ampiasaina avo eo Google Planet Keyword Planner Manoritsoritra ny vidin’ny sainam-pirinty ho an’io fikarohana io ary maminavina hoe ohatrinona no azonao atao amin’ny Google Adsense click *؛ ary noho izany، ohatrinona no azonao atao amin’ny fivarotana habaka adiresy.
Mariho fa tsy misy fitsipika mazava an-Tsoratra fa fanombantombanana be loatra، Google dia mando ny 30 – 50٪ ny vidin’ny klikan’ny Adsense Publishers.
Fomba iray hafa hamaritana hoe ohatrinona (ary ny tena zava-dehibe indrindra، raha) mandany ny dokam-barotra pay-per-click (PPC) Ny doka dia amin’ny SpyFu.
Spyfu ، GoogSpy tany am-boohohany ، dia fitaovana fikarohana momba ny fikarohana izay mampiseho ny teny fanalahidin’ny mpividy ao amin’ny Google Adwords. Mampiasa azy aho isaky ny mila mitady fikarohana lalina.
Ny sary eto ambany dia ohatra sasantsasany izay hitako tamin’ny Spyfu جستجوی رایگان. Ny tsirairay amin’ireo fikarohana ireo dia latsaka kely noho ny minitra 5 mba hamitana azy – ary azoko fantarina ny tombom-barotry nese niche amin’ny fandinihana ireo antontan-taratasy ireo. Misy tsipirian-javatra sarobidy kokoa raha toa ka mihoatra ny fikarohana malalaka isika saingy hifikitra amin’ny famoahana maimaim-poana amin’izao fotoana izao. Mba hanaovana ny fikarohana ataonao dia tsindrio fotsiny amin’ny mpifaninana anao (na ireo mpilalao lehibe ao amin’ny sainanao) amin’ny fikarohana.
Ny tena fiainana marina # 1 – $ 64،000 / mo amin’ny adwords
طاقچه شماره 1 – vokatra malefaka، vahaolana raharahambarotra. Misy mihoatra ny orinasa hafa an’ny 10 izay manolotra fandaharam-pikambanana ao amin’ity orinasa ity. Spyfu nanombantombana fa ity mpivarotra ity dia mandany 64،000 $ amin’ny Adwords isam-bolana.
طاقچه شماره 2 – 100،000 دلار در ماه / Adwords
Niche # 2 – Fanatanjahantena ara-panatanjahantena – mieritrereta marika ara-panatanjahantena اسباب بازی ny Adidas، Nike، ary New Balance، fa amin’ny kely kokoa ary mifantoka amin’ny karazana fanatanjahantena. ity orinasa ity dia mandany mihoatra و 100000 دلار isam-bolana amin’ny tenifototra maherin’ny 57،000 araka ny Spyfu.
طاقچه شماره 3 – 60،000 دلار در ماه / ماه قبل از Adwords
Ny Niche # 3 – mpamatsy solosaina IT – tsena iraisam-pirenena، ​​ny ankamaroan’ny olona izay mitaky tranonkala dia mila izany. Misy 10 – 15 mpilalao lehibe hafa amin’ity sehatra ity. ity orinasam-pandraharahana ity dia manolotra ny tenimiafina 3،846 ao amin’ny Google ary mandany و 60،000 دلار isam-bolana.
طاقچه شماره 4 – 9،500 دلار در هر ماه از Adwords
طاقچه شماره 4 – Mpanome tolotra tranonkala. Ity orinasa ity dia iray amin’ireo fanombohana mahazatra vitsivitsy taona vitsy lasa izay. (Gaga aho mahita azy ireo mandany efa ho 10،000 $ isam-bolana amin’ny adwords).
طاقچه شماره 5 – 71،500 دلار در هر ماه Adwords
طاقچه شماره 5 – Vokatra ara-Bola manerantany. Ny sary nalaina dia ny fanadihadiana iray amin’ny iray amin’ireo mpilalao lehibe indrindra amin’ity sambo ity. nanana tranonkala roa tao amin’ity orinasa ity aho niverina tao amin’ny 2000 – tsy ho gaga raha mahita orinasa mandany mihoatra و 100000 دلار isam-bolana amin’ny adwords.
طاقچه 6 – 24200 دلار در ماه برای Adwords
طاقچه شماره 6 – Mpanome tolotra tranonkala. Ity tranonkala ity dia tranonkala iray ary tsy mivarotra ny vokany manokana. Ny tompon’ny tranokala dia mandany vola mihoatra و $ 20،000 isam-bolana amin’ny dokambarotra PPC.
محل اتصال کمیسیون
Fomba iray hafa ampiasaiko matetika mba hitsaràna ny tombotsoan’ny niche iray dia mijery ireo isa ao Junction کمیسیون (CJ).
مسی mpandraharaha manan-danja ve?
Azonao ampiasaina ny vola harenina (barazy maitso) ho toy ny mety ho endriky ny karama.
Fandanian’ny tambajotra = Manao ahoana ny habetsahan’ny mpividy raha oharina amin’ny ankapobeny. Hahazoana harena ambony kokoa = fidiram-bola bebe kokoa amin’ny program؛ Volan’ny 3 EPC = salanisa isaky ny klioba 100 = Ny tombony azo antoka dia ity programa afiliana ity amin’ny fotoana maharitra؛ 7 andro EPC = salanisa isaky ny klioba 100 = ity vokatra ity?
Fomba شماره 2: Facebook
Ny haino aman-jery sosialy lehibe indrindra eran’izao tontolo izao dia tena fitaovana lehibe hahafahanao manazava ny vaika vaovao azonao. Fantaro bebe kokoa momba ny mpihaino kendrena anao، ampio ny mpifaninana aminao، tadiavo ny zoro iray hamehezana niche niche anao، sy ny sisa.
صفحه فیس بوک Raha efa manana ianao (afaka mamorona iray ianao alohan’ny hanombohana blôgy، afaka maimaim-poana)، ny toerana voalohany hijerena ny fanorenanao. Alefaso any amin’ny sasany amin’ireo fanatanjahan’ireo mpankafy ireo ary tandremo ny demografika (lahy / vavy، toerana، manambady / tokana / nisara-panambadiana، taona، sns) ary ny tombontsoany.
گروه فیس بوک Mifandraisa am-piangonana – vakio ny resadresaky ny mpampiasa mba hahatakatra ny olana sy ny filany.
Ho an’ireo izay manana pejy Facebook dia mandehana ao amin’ny Insights> بررسی اجمالی> سازمان دیده بان Pejy هو. Ity no hitanao ary ampitahao ireo pejy mitovy soso-kevitry Facebook. Azonao atao tsindriana amin’ny rohy tsirairay mba hahitanao ireo lahatsoratra malaza nivoaka tao amin’ireo pejy ireo.
Fantaro ireo lohahevitra malaza ao amin’ny fonosanao – Inona ny hype farany ao an-tanàna؟ Afaka mahita angom-baovao ho an’ny blôginao ve ianao amin’ny fijerena ireo fironana ireo?
Fantaro ny mpihaino anao – Aiza izy ireo no mandany fotoana؟ Inona ny olana mahazo azy ireo؟ Afaka manome vahaolana ve ianao?
Jereo hoe nahaana n olona no mivedy amin’ny mpifaninana aminao – Afaka manome zavatra mitovy ve ianao ary manangom-bola?
Jereo hoe nahaana n olona no tsy mividy amin’ny mpifaninana aminao – Manahirana loatra ve ny vokatrao؟ Angamba tsy manakarama izany marina izany. Afaka manao zavatra tsara kokoa ve ianao ary mahazo ny mpitsidika azy?
Manorata lohateny lehibe sy votoatim-baovao – Fantaro hoe iza amin’ireo lahatsoratra ao amin’ny Facebook no mahazo ny fidirana ambony indrindra، manorata lohateny toy izao.
Fomba شماره 3: Fikarohana fikarohana teny amin’ny sekoly fanabeazana taloha
سدیم میاندری … tsy izany ianao؟ Eny ary، tsy manenjika soavaly maty intsony aho Ity misy lisitra tsara ho an’ny mpandray anjara.
Nahoana no fikarohana momba nok sokajy?
Ny lavaka lava vava amin’ny teny Malemy (اعتبار: Alefaso any amin’ny Fox).
Ny fikarohan’ny sokajy dia matetika atao هر SEO-amand-piandohan’ny fanentanana. Ny tanjon’izy ireo، matetika kokoa noho ny tsy، dia ny mamantatra matetika ny teny fanalahidy notadiavina (هو fohy na lava lava) ary mametraka lalana ho an’ny fanentanana.
اینونا داده داده kokoa amin’ny غلط نیست?
Fikarohana bebe kokoa = مزخرفات fangatahana؛ Valiny misimisy kokoa no niverina tao amin’ny pejy valin’ny fikarohana = fanampiny.
اوهاترا: هو آنی فاکنتاری – نیکون ، کانن ، سونی؛ هو ماریزی – بالی ، مالدیو ، هاوایی؛ ho an’ny tranonkala – iPage ، BlueHost ، Hostgator؛ هو آنی الو مالزا – تیلور سویفت ، لینکین پارک ، برونو مریخ.
Amin’ny ankapobeny، ny fividianana mividy dia Avo kokoa raha be ny karoka momba ny ‘famerenan’ny Widget’، ‘ny sarisary modly ary ny anarana’، ’10 best widget brand’، ‘widget mivedy online’. Mifanohitra amin’izany، ny fikarohana momba ny ‘tantaram-pifandraisana’، ‘widget fitarainana’، na ‘ny fanaovana Widget’ dia mety hiova ho fifanakalozana ara-barotra.
Ny dokam-barotra mendrika kokoa amin’ny fikarohana fikarohana manokana، ny sandam-barotra ambony kokoa dia ho an’io fikarohana io.
Tamin’ny fotoana voalohany nanombohako، maro ireo وب مسترها (mariho – dia mbola niankina tamin’ny fitaovana iray antsoina hoe "اورتور") – izay ahafahanao mametraka fomba fikarohana tsotra fotsiny ny ‘mpitoraka blaogy’ ary ny rafitra dia hanome endrika sarotra anao indraindray io teny io dia mikaroka، maimaim-poana. Aminay dia ampitahao ireo isa isreo miaraka amin’ny habetsaky ny valim-pifidianana ary hitsara ny panpananana (ary ny سودآوری) amin’ny niche.
Ny Google Keyword Planner dia iray amin’ireo fitaovana maotina vitsivitsy ampiasaiko amin’izao fotoana izao (raha azonao atao ny mandoa vola، manoro hevitra AHREFS aza Aza maimaika).
Ny sarimihetsika filma dia iray amin’ireo zanako indrindra. Tsy manangona azy ireo aho fa mankasitraka ny hatsaran’ny zavakanto sy ny fahatsiarovan-tena ao amin’izy ireo. Andeha hojerentsika raha afaka mampitodika ny fahalianako amin’ny hevitra bilaogy mahasoa izahay. Mariho fa tsy nanao fikarohana aho talohan’ny nanoratako ity torolàlana ity – ka dia mahaliaa ahy toy ny amin’izao fotoana izao.
Raha mijry ny endrika، dia toa tsy mandeha amin’ny Internet intsony ny lohahevitra – izay tena lojika raha jerena ny fotoana lanin’ny olona ao amin’ny YouTube androany.
Rehefa mivoatra dia afaka mahita koa izahay fa ny ankamaroan’ny mpikaroka dia any Etazonia، Kenya، Inde، Aostralia، ary Kanada.
Mba hahatakarako tsara kokoa ny tabilao، matetika aho dia mampitaha ny fironana tsy fantatra amin’ny zavatra fantatro. Amin’ity ohatra ity dia nampidiriko ny teny hoe "میزبان fanamarinana". Hitanao fa misy olona maro kokoa mitady "afisy sarimihetsika".
برنامه ریز کلمات کلیدی Google Planet
Avo Eo، handeha ho amin’ny keyword Google Planer izahay mba hahazo hevitra bebe kokoa.
Tsindrio ao amin’ny "sarimihetsika" amin’ny sarimihetsika ary tsindrio "ایده بگیرید".
Ny pejy voalohan’ny pejy (jereo eto ambany) dia mampiseho fa maro ireo karazana fikarohana amin’ny sarimihetsiketsa momba ny sarimihetsika (fandaharana 41،900 + isam-bolana)، horonantsary sarimihetsika horonantana (tsoronhetsana horonantana) sarimihetsika sarimihetsika، sarimihetsika malaza (3،400 + horonantsary fikarohana)، Hollywood afisy sarimihetsika (Fikarohana 1600 + isam-bolana)، sy ny sisa. Misy ihany koa ny fangatahana խուսափ lenta kokoa momba ny famoronana ny sarimihetsika fimailo (22،000 پوند فیکاراهانا).
Azontsika atao ve ny manamarika ny fividianana fikolokoloana amin’ireto karoka ireto (raha mivarotra mivantana ny sarimihetsika mivantana ny drafitra)؟ آزوناو Atao ihany koa ny lohahevitra ifanakalozan-kevitra.
Fehezanteny manan-danja ahitana ny "پوستر فیلم بسازید" – ireo mpikaroka ireo no tena mitady ny lesona sy fitaovana fanontam-pirinty.
Mba hahalalantsika bebe kokoa ny lohahevitsika dia andao isika handefa hevitra misimisy kokoa هو an’ny teny Ubersuggest.
Miverina her amin’ny جستجوی Google
Ahoana raha tsy te hivarotra vokatra ara-batana isika؟ Fantatrao – tsy dia mahafinaritra loatra ny fanodinana sy logy logistics. Afaka miblaogy sy mivarotra sehatra dokam-barotra fotsiny ve isika؟ Mba hamaliana ity fanontaniana ity dia andramo ny fikarohana sasantsasany ao amin’ny Google ary hijerena raha afaka mahita ny mpizarazara na ny programa afiliana isika.
آزوناو atao ihany koa ny موضوع akaiky ny dokam-barotra amin’ny dokam-barotra amin’ny dokambarotra – moa ve izy ireo mamorona dokam-barotra eny an-dalam-pikarohana؟ Raha eny، inona ni bilaogy؟ Afaka mivarotra mivantana mivantana amin’ireo mpivarotra ve ianao؟ Manome toky ny tombombaran’ity lohahevitra ity، dia afaka mampihatra ity data ity fanalahidy ity amin’ny Spyfu izahay mba hamaritana hoe آتشین ny mpizarazara no mandany.
Mba handinihana lalindalina kokoa، mety te-hibitsika amin’ny valin’ny fikarohana biolojika isika (tranokalan’ny rohy، ny fanatsaràna ny onjam-peo، ny haino aman-jery sosialy، sns.) mba hahitana ny fahotot پالپانانانا مامبا سئو.
Ny pananinanana SEO
Ankehitriny dia manana ny tsenan’ny tsena rehetra ilaina isika – fotoana hanapahan-kevitra. توکونی hitsambikina ve isika؟ Tena tsara tokoa ve izany؟ Inona no mety ho fiantraikany amin’ny fanatonana izany؟ Havelako ho anao ny fanatsoahan-kevitra.
Zavatra iray، na izany aza، maniry n hamoaka mazava aho alohan’ny hamaranana ity fizarana ity – dia ny momba ny fanapahan-kevitrao amin’ny niche.
Maro amin’ireo manam-pahaizana no manoro hevitra vaovao mba hisorohana ny fifaninanana SEO SEO tsy hivezivezy ary hisafidy karazan-tsarimihetsika kely kokoa rehefa misafidy nese niche.
Mino ny mifanohitra amin’izany aho. Tokony hanandrana ny dobo goavana ianao (teny filamatra eo amin’ny fikarohana miaraka amin’ny fangatahana խուսափ lenta sy ireo mpifaninana lehibe) satria io no misy ny mpijery sy ny vola.
شماره 2 Hifindra amin’ny lanjan’ny singa # 2: هدفدار هدفدار izao isika
Kitapom-pahefana tsotra izany – Aleo lazaina fa ianao dia mitantana bilaogy DIY sy mivarotra zavakanto. Ny tahan’ny fanodinana ny blôginao dia 3٪ ay ny sandan’ny fanovana dia 25 $. Amin’ny ankapobeny، ho an’ny mpitsidika rehetra 100 ianao dia hanao ny fivarotana 3 ary manao 75 $. Raha miakatra amin’ny 200 ny isan’ireo mpitsidika manana lasibatra، avy eo ny teorika dia hisy fivarotana enina ary 150 $ mahasoa ny lalana.
Raha toa ianao ka tsy mampiasa ny tranonkala havanana mba handinihana ny fandrosoana sy ny fandikana tsara ny tranokalanao، dia mety haka dingana roa ianao raha tokony ho dingana iray.
Miankina amin’ny toetran’ny sainao sy ny fahaiza-misaina، azonao atao ny mijery ny karazana statistika samihafa.
Jereo aloha ، Google Analytics ny tatitra dia mety ho mahery vaika. مارو نی ایسا! Ary mety tsy ho fantatrao ny sasany amin’ireo metika na hevitra.
ساینگ ، مارینا دیا مارینا مارینا:
Ny tarehimarika / hevitra dia tsy sarotra، ary
Mandehana tsotra. Ny tanjonao dia ny hanangana blôgy tsara kokoa ho an’ny mpampiasa anao، fa tsy mandany ora maro aorian’ny ora fianarana ny teknika ao ambadiky ny Google Analytic.
جلسات / کاربران به دست آورد
Sampan-draharahan’ny fifamoivoizana / ارجاع
Eny، mandatsaka ezaka bebe kokoa sy vola amin’ny tetika izay miasa ianao.
Google Analytics (اکتساب> Ny fifamoivoizana> Loharano / Fampahalalana)
(Mba hahitana ity nomerao ity dia midira ao amin’ny Google Analytics Dashboard> Fitondràna> محتوای سایت> تمام صفحات.)
Mifototra amin’io angon-drakitra io aiza izao، manana pejy maromaro manome ny tahan’ny faharetana tsara indrindra.
Ireo fanontaniana nanontaniako tena tamin’ity to-javatra ity:
Afaka mahazo olona ve aho هو tafatafa ho an’ny vahiny ary hampian-danja kokoa ny lahatsoratro?
Ankehitriny efa vita miaraka amin’ny paikadera amin’ny ankapobeny isika، fotoana izao mba hikarohana ireo paikady fitaterana bilaogy manokana.
1. ارسال مهمان
Raha toa ianao ka vaovao amin’ny fandefasana hafatra، dia nanoratra antsipiriany i Lori Ahoana ny fomba fitaterana mailaka an-tariby tany aloha، mandehana امور.
Ny fanalahidin’ny fahombiazana، raha ny fahitako azy، dia ny mahita ireo bilaogy tsara – ireo izay manana mpamaky marina sy mpanaraka ny media sosialy. Azonao ampiasaina Topsy یا Buzz Sumo ny mahita ireo bilaogy malaza sy ny mpikatroka ao amin’ny orinasanao. Na، afaka mandinika akaiky ny faritra fanehoan-kevitra ianao raha te hahalala raha mifanerasera amin’ireo bilaogera ireo mpamaky. Aza hadino hatrany fa mitoraka blaogy ho an’ny mpamaky tena ianao (noho izany dia zava-dehibe n kalitao atiny). Aza hadino ny mandefa bilaogy manana Google PR Avto lenta fa ny mpamaky tsy misy fiasa – tsy mandeha amin’ny 2015 intsony ity fanao ity.
20 رسانه ترو-مشترکا آرا-تسویالیایی سوسیالی ووی آمینونی منام-پاهیزانا
3. فیس بوک Adiresy
Ny Facebook dia fomba mandaitra (sarotra ny 0.06 $ / tranonkala hidirana amin’ny indostria sasany) mba hanintonana mpitsidika vaovao. Ny ampahany sarotra amin’ny dokam-barotra Facebook dia ny hoe mila mandinika be loatra ianao (adiresy an-tserasera، firenena samihafa، tombontsoa samihafa، sns) mba hahombiazana.
مامورونا drafitra. Hanampy anao handamina ny hevitrao rehefa manoratra ianao.
Atsaharo ny fotoana isan’andro hanoratana. Aza olona manomboka manao ebook ary tsy mamita azy mihitsy. Sakano ora iray isan’andro، roa ora، 15 minitra – tsy olana na firy na آتشین. io fotsiny Soraty.
جلد Manamboara (به عنوان مثال Canva) در مورد ماندوآ آنتیسرایرا iray hanao izany (mpamorona iray tsy miankina ~ 26 $ / ora averina araka ni fijeriko ny fandaniana)
فتوشاپ ny fonosanao amin’ny sary ebook 3D. Pat Flynn dia nanambatra nah lahatsary lehibe momba ny fomba hanaovana izany.
ویتا ایانائو! ankehitriny mampiroborobo izany amin’ny votoatin’ny fonao.
Raha efa eo ianao no miresaka ary Manolotra vokatra sy serivisy ho an’ny mpihaino anao، maninona raha manangom-bola amin’ny olona lazainao?
Tsy maninona na dia ny mpamaky izany aza، ary mahazo komisiona ianao isaky ny misy mividy ny vokatra.
بازاریابی وابستگی dia mety ho loharanom-bola lehibe ho an’ny asa fanampiny fanampiny. Jereo ireto hevitra ireto mba hampidirana ny varotra afrikana amin’ny fidiranao:
Alefaso aloha ireo lahatsoratra efa navoakany sy tadiavo ireo vokatra na serivisy voalazanao. Raha vao hitanao izy ireo، mandehana fotsiny amin’ny tranokala tsirairay ary mitadiava pejy "شرکت های وابسته".
ایو دیا دی آاهو نی تورولالانا نگه هو لسا mpiara-miasa. Raha vao Tonga iray Iianao، dia matetika ianao dia mahazo ID iray mitazona ny adiresy ao amin’ny faran’ny URL.
Ataovy lisitra ny vokatra sy ny serivisy ampiasainao. Mampiasa rindrambaiko an-tserasera maro aho izay mifandray amin’ny orinasako. Mety هو tombontsoa lehibe ho an’ny fidiram-bola izany.
Mandehana any amin’ny tranokalan’ny vokatra tsirairay ary jereo raha manana pejy mifandray izy ireo. Raha manao izany izy ireo، misoratra anarana amin’ny programa.
Asehoy ny fomba ampiasanao ny vokatra na ny serivisy. Manampy amin’ny fanamafisana ny asanao ve izany؟ Manampy anao amin’ny SEO و izany؟ Manampy anao hanatratra ireo mpitoraka blaogy manan-danja ve izany?
Amporisiho ity lahatsoratra ito ho an’ny mpihaino، ao amin’ny media sosialy، ary ny atody anaty aterineto feno olona mety haniry ny vokatra mitovy amin’izany.
Te-hampiasa vokatra iray ianao fa tsy afaka manome izany؟ Ahoana raha azonao atao ny mamerina ny volanao ao anatin’ny fotoana fohy?
Raha manana programa afrikana ny vokatra، dia mety tena izy izany.
والوهانی ، ataovy lisitry ny vokatra / tolotra tianao hampiasaina. اویو دیا مندهانا هر آمینونی وهیکالانی ary jereo raha manana programa afilialy ry zareo.
Raha manao izany izy ireo، mividiana ny vokatra ary midira an-tsoratra. Avy eo dia ampiasao izany، mamoròna fehezanteny / fampianarana، ary mampivoatra ny lahatsoratra ho an’ny mpihaino anao tahaka ny nataonao teo aloha.
Ireo lahatsoratra ireo dia afaka mijanona ho mavitrika mandritra ny fotoana lava، ka mitondra fidiram-bola ho an’ny fiainan’ny lahatsoratra tsirairay.
Ny mailaka dia fitaovana mahery بازاریابی بازاریابی. Iray amin’ireo fantsona vitsivitsy arahin’ny olona isan’andro izy io vonona ny hivarotra.
Tahaka ny fampiroboroboana vokatra avy amin’ny orinasan-tserasera ao amin’ny blôginao، ny fampiroboroboana ireo vokatra ireo amin’ny mailaka autoresponder dia afaka mamokatra fidiram-bola ho anao.
Azonao atao ny mampiroborobo mivantana azy ireo amin’ny mailaka na mamorona torolalana lahatsoratra bilaogy ary hampiroborobo ireo. Na izany na tsy izany، dia afaka mahazo vola any.
Atombohy amin’ny alàlan’ny mailaka vitsivitsy voalohany misy atiny mahasoa izay tsy mivarotra na inona na inona. Hanampy anao amin’ny fametrahana n fitofisana amin’ireo mpanjifa vaovao.
Mipetraha amin’ny fifandraisana fananganana mailaka، اسباب بازی ny fangatahana ireo mpandray anao raha afaka manampy azy ireo amin’ny zavatra ianao. Hanorina fitokisana koa izany ary hampihenana ny anaran’ny soratra.
Rehefa mampiroborobo ny vokatra dia mifantoha amin’ny valiny azony azony fa tsy ilay vokatra fotsiny. Raha mahazo valiny ianao amin’ny fampiasana azy، dia ho azonao antoka fa hazavainao amin’ny an-tsipiriany ireo. Ity no hanao ny varotra ho anao.
ایده شماره 3: Manomàna birao iray
Tafiditra ao amin’ny birao job ny mpiasa mitpi mpiasa. Afaka manolotra sehatr’asa feno amin’ny fotoana feno izy ireo، amin’ny fotoana sasany، na amin’ny pananarahana.
اوهرا ، Joba Mifanaraka amin’ireo mpitoraka bilaogy miaraka amin’ny orinasa miezaka manakarama olona hamorona votoaty ho azy ireo.
TL؛ DR / ماندروسو
Eny، afaka mamelona amin’ny alàlan’ny fitoraham-blaogy ianao. Ny sasany amin’ireo mpitoraka bilaogy ambony dia mahazo olona akaiky enina eo ho eo isam-bolana.
Ny fomba tsara indrindra handrafetana ny blôginao: تبلیغات ، بازاریابی وابسته ، fivarotana vokatra sy serivisy.
Tena zava-dehibe ny kalitaon’ny votoatin’ny blôginao. Fa mba hanombohana ny vola، ny bilaoginao koa dia mila ao anaty orinasa mahasoa ary mahazo fifamoivoizana azo trandrahina.
Nifampizarako mihoatra ny antsasak’ireo tenimiafiko manokana ny tetikady، toro-hevitra ary hevitra ao amin’ity lahatsoratra ity. Tena ho faly sy faly aho raha manentana ny sasany aminareo handy ny dingana manaraka ary manomboka mametraka ny blôginao amin’ny alalan’ireo paikady voalaza etsy ambony.
Maro ireo Tonga nanatona ahy tamin’ny lasa izay nanana loharano ampy (fahaiza-manao، fahalalana، fotoana) hanombohana bilaogy sy vola. Saingy tsy nahomby izy ireo – satria mbola nanana fialantsiny ihany koa izy ireo hanemotra ny tetikasany ary hiandry ny kintana hifanaraka.
Afaka manoro anao fotsiny aho ary manala vato misakana vitsivitsy eny an-dalana. Mba hahombiazanao، dia mila mandeha eny an-dalana ianao.